Ciise: Waa Mid Khaas ah Baybalka iyo Quraankaba
Written by Abdi Duale
Ka Dhalashadiisii Bikradda
Baybalku wuxuu calool-galkii Ciise ee bikradda Maryan uga hadlayaa inay ahayd waxyi toban qarni ka hor la sii sheegay oo meel maray ama la kaamilay, kaas oo lagu sheegay inuu wiil dhalan doono oo magaciisuna ahaan doono Cimmaamuu'eel oo macnihuusu yahay "Ilaah baa inala jooga" (Ishacyaah 7:14).
"Bishii lixaad Ilaah baa malaa'ig Jibriil u soo diray magaalada Galili oo Naasared la odhan jiray, ilaa gabadh bikrad ah oo u doonanayd nin la odhan jiray Yuusuf oo dhashii Daa'uud ahaa; gabadhana waxaa la odhan jiray Maryan. Malaa'igtii baa u soo gashay, oo waxay ku tidhi, Nabad, adigoo nimcaysan, Rabbiga ayaa kula jira. Markaasay hadalkii ka naxday, oo waxay isku tidhi, Maxay tahay salaantan? Malaa'igtii baa ku tidhi, Ha baqin, Maryamay, waayo, nimco ayaad Ilaah ka heshay. Bal eeg, waad uuraysan doontaa, oo wiil baad umuli doontaa, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise." (Luukos 1:26).
Markii ay Maryan malaa'igtii weydiisey, "Sidee baa waxanu ku noqon doonaan? Anigu ninna garan maayo."(Aayadda 34). Malaa'gtii waxay u sheegtay in Ruuxa Quduuska ahi iyada ku soo degi doono iyo in xooggii Kan ugu sarreeya uu iyada hoosiis kuu noqon doono. Wuxuu kaloo Injiilku ka hadlayaa inuu Malakul Jibriil riyo ugu muuqday Yuusufkii ay doonanayd kaddib markuu iyada ka shakiyey, oo isaga u sheegay in uurka ay leedahay uu ku yimid awoodda Ruuxa Quduuska ah (Matayos 1: 18-21).
Sidoo kale QURAANKUNA labadan meelood ayuu ku qorayaa waxyigii Maryan u yimid iyo ka dhalashadii Ciise ee bikradda: Ka hore wuxuu odhanayaa: "(Xusuuso) markey tidhi malaa'igta Maryamey Eebe wuxuu kuugu bishaarayn kelimo xaggiisa ah (Wiil) magaciisu yahay Masiix Ciise Ibnu Maryam isagoo sharaf leh adduun iyo aakhiroba, kana mid ah kuwa la soo dhoweeyey. Kulana hadli dadka dharabta iyo isagoo (gadhmadoobe) nin weyn ah, kana mid ah kuwa suuban." Waxay tidhi Maryan, "Eebow sidee ilmo iigu ahaan doonaa isagoon dad (nin) i taaban?" Wuxuu yidhi (Eebe) "Saasuu Eebe wax u abuuraa wuxu doono, markuu xukmin amarna wuxuu u dhahaa ahow wuuna ahaadaa." (Suuradda 3:45-47).
Meel labaad ayaa ogeysiintii Ciise si qoto dheer loogu faahfaahiyey oo Maryan loogu ballanqaaday inuu wiilkeedu bini'aadanka u ahaan doono waxyi iyo nimco Ilaahay ka timid (Suuradda 19:16-22). Haddii mid weydiiyo sababtii uu Ciise sidaas khaaska ah ugu calool galay ee aanu qofna weligii ugu calool gelin, Quraanku tan jawaab cad buu ka bixinayaa. Iyadu waa inay Ciise u uuraysataa sidan khaaska ah waayo wiilkeedu waa mid khaas ah oo aan midna la mid ahayn. Quraanku si khaas ah ayuu Ciise uga hadlayaa iyadoo la siiyey magaca ibn Maryam, wiilkii Maryan. Ma jirto haweeney kale oo Quraanka lagu magacaabay.
Dembi La'aanta Ciise
Baybalku wuxuu sheegayaa inuu Ciise ahaa qofka keliya ee abid noolaa ee aan haba yaraatee wax dembi ah lahayn. Bini'aadanka oo dhan dembi ayay galeen, laga soo bilaabo Aadan, oo waxaa iyaga ka awood badiyey dembiga (Rooma 3:9), oo markay dembaabeena waxay gaadhi waayeen ammaantii Ilaah (Rooma 3:23). Ciise oo keliya ayaa laga reebay. Aayadan ayaa si cad u sheegaysa iin la'aantiisa "Isagu ma uu dembaabin, khiyaanona afkiisa lagama helin." (1 Butros 2:22). Aayado kale ayaa tan xoojinaya, oo sheegaya inuu Ilaahay isaga dembigeenii saaray isaga oo bilaa dembi ah, si aynu innagu Ilaahay xaq ugu noqono (2 Korintos 5:21). Waxaynu ognahay inuu Ciise u yimid inuu dembiyada qaado, iyo inaan isaga dembi ku jirin (1 Yooxanaa 3:5).
QURAANKUNA sidoo kale wuxuu sheegayaa inuusan Ciise dembi lahayn. Markii uu Malakul Jibriil ogeysiinayey Maryan inay Ciise uuraysan doonto, wuxuu ku yidhi:
"Anigu waxaan uun ahay rasuulka Eebahaa inaan ku siiyo wiil daahir ah." (Suuradda 19:19) Xataa haddaynu xadiiska fiirino, xadiis Abuu Hurayra soo weriyey ayaa odhanaya, "Shaydaanku qof kasta oo bini'aadan ah wuu taabtaa maalinta ay hooyadiis dhasho, oo aan ka ahayn Maryan iyo wiilkeeda."( Saxiix Muslim, cadadka 4, bogga 1261)
Erayga af Carabi ahaan loo isticmaalay waa Qulaaman Sakiyaa, "wiilka ugu wada quduusan." Erayaga Sakiyaa macnahiisu waa "aan iin lahayn," oo laba jeer oo keliya ayuu Quraanka ku qoran yahay. Quraanku wuxuu halkan ogolaanayaa waxbaridda Baybalka ee ah inuu Ciise ahaa shakhsiga keliya ee taariikhda soo maray ee aan dembiga lahayn, waayo Quraanku meelna sidan oo kale qof ugaga hadli maayo. Laakiinse Quraanku wuxuu si cad u qeexayaa dembiyadii nebiyadii kale, Aadan (Suuradda 7:23), Ibraahim (Suuradda 26:82), Muuse (Suuradda 28:16), Yoonis (Suuradda 37:142) iyo Maxamed (Suuraddaha 47:19, 48:2). Markaynu Maxamed eego, waxaa isaga si toosa loogu amrayaa inuu toobadkeen weydiisto (Wastaqfir) dembiyadiisa daraadood (dembika).
Ciise Samada ayuu u Baxay
Axdiga Cusub wuxuu mar kale si joogto ah inoo barayaa inuu kaddib markii uu dhimashada ka sarakacay Ciise isagoo jidh leh samada aadey. Erayga Ilaahay sidan ayaa dhacdadaas loogaga hadlay:
"Oo kolkuu waxyaalahaas yidhi dabadeed, iyagoo eegaya, ayaa sare loo qaaday isagii, oo daruur baa indhahoodii ka qarisay. Oo intuu sii socday, iyagoo samada aad u fiirinaya, ayaa waxaa isa soo ag taagay laba nin oo dhar cadcad qaba, oo waxay ku yidhaahdeen, Nimankiinan reer Galiiliyow, maxaad la taagan tihiin oo aad samada u eegaysaan? Ciisahan samada laydiinka sare qaaday, sidaad u aragteen isagoo samada u socda oo kale ayuu u iman doonaa." (Falimaha Rasuullada 1:9-11)
QURAANKUNA hal ayaad oo keliya ayuu ku qirayaa inuu Ciise samada u baxay, taas oo keentay inay Muslimiinta oo dhan rumaysan yihiin inuu Ciise maanta nool yahay oo Ilaahay hortiisa joogo.
"Laakiinse waxaa u koryeelay xaggiisa Eebe." (Suuradda 4:158)
Quraanka iyo Baybalka labadooduba waxay barayaan sare u bixidii Ciise isagoo nool oo jidh leh. Waxaa kaloo mudan in la sheego in xadiiska keliya ee arrintan ka hadlayaa uu isna qirayo inaan shaki ku jirin in Ciise samada loo qaaday.
Imaanshaha Labaad ee Ciise
Arrinta kale ee Ciise ku saabsan ee ay Baybalka iyo Quraanku isla oggol yihiin waa inuu Ciise samada ka soo noqonayo oo adduunka imaan doono dhammaadka wakhtiga. Baybalku si qoto dheer ayuu tan uga hadlayaa:
"Markaasaa waxaa cirka ka soo muuqan doona calaamada Wiilka Aadanaha, markaas ayaa qolooyinka dhulka oo dhammu barooran doonaan, oo waxay arki doonaan Wiilka Aadanaha oo daruuraha cirka ku imanaya isagoo leh xoog iyo ammaan weyn." (Matayos 24:30)
"Maxaa yeelay, Rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka Ilaah." (1 Tesaloniika 4:16)
"Bal eega, wuxuu la imanayaa daruuraha, oo waxaa isaga arki doona il kasta iyo kuwii isaga wareemay; oo qabiilooyinka dhulka oo dhammuna isagay u barooran doonaan." (Muujintii 1:7)
QURAANKUNA mar kale aayad keliya ayuu tan kaga hadlayaa, tan oo keentay inay Muslimiinta oo dhammi rumeeyaan in maalin uun uu Ciise samada ka soo degi doono. Aayadduna sidan ayay odhanaysaa:
"Nebi Ciisana waa calaamadda Saacadda (Qiyaame) ee ha ka shakiyina, raacana kaasaa ah jidka toosane." (Suuradda 43:61)
Ciise oo keliya ayaa Quraanku ugu yeedhaa Masiixa. Ma jiro nebi kale oo darajadan la siiyey. Kow iyo toban jeer ayuu Quraanku Ciise ugu yeedhayaa Masiix, oo ay ku jirto Suurada 4:171. Laakiinse, Quraanku iskuma deyayo inuu darajadan micneeyo ama fasiro, sidaas daraadeed waxaynu micnaha tan ka ogaanaynaa Towreeda iyo Injiilka, halkaas oo laga helayo magacyada Masiix iyo Wiilka Ilaahay.
Xertii Ciise magacyada Masiix iyo Wiilkii Ilaahay isku si bay u isticmaali jireen. Tusaale ahaan Butros oo xertii Ciise ka mid ayaa yidhi, "Waxaad tahay Masiixa ah Wiilka Ilaaha nool." (Matayos 16:16) Nataani'eel (Yooxanaa 1:49), Markos (Markos 1:1), Maarta (Yooxanaa 11:27). Kuwo kale oo aan xertii Ciise ahayn ayaa iyaguna darajadan isticmaalay, tusaale ahaan, Kayfas oo Wadaadkii Sare ee Yuhuudda ahaa ayaa markii Ciise dacwadu ku socotey isaga weydiiyey, "Ilaaha nool ayaan kugu dhaarinayaa ee noo sheeg inaad tahay Masiixa oo ah Wiilka Ilaah, iyo in kale." (Matayos 26:63)
Xataa jiniyadii ayaa isaga sidan u gartay. Iyagu weligoodba waxay isaga u yaqaaneen Wiilka abadiyanka ah ee Aabbaha ka yimid, oo qof ahaana isaga way u garteen markii uu iyaga si awood leh ugu amray inay dad ka soo baxaan: "Jinniyona dad badan ayay ka soo baxeen, iyagoo qaylinaya oo leh, Adigu 'waxaad tahay Wiilka Ilaah'. Isaguse waa canaantay oo uma oggolaanin inay hadlaan, waayo, waxay garanayeen inuu Masiixa yahay." (Luukos 4:41)
Markaa, marka uu Quraanku leeyahay Ciise waa Masiixa, wuxuu u ogolaanayaa inuu Isagu yahay Wiilkii Ilaahay laftiisa, si kastoo ay wadaadadu isugu dayaan inay si kale u fasiraanba.
Ciise: Erayga Ilaahay
Ciise waa Eraygii Ilaahay. Bilowga Injiilka sida uu Yooxanaa u qoray ayaa tan si faahfaahsan u caddaynaysa:
"Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah. Isagu Ilaah buu la jiray bilowgii. Wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis. Isaga waxaa ku jirtay nolol, noloshuna waxay ahayd nuurka dadka... Ereyguna jidh buu noqday, oo waa ina dhex joogay, oo waxaannu aragnay ammaantiisii, taas oo ahayd ammaantii u ekayd tan Wiilka keliya ee Aabbaha, ee nimco iyo run ka buuxa." (Yooxanaa 1:1-2, 14)
QURAANKA laftiisa Suuradda 4:171, Ciise waxaa loogu yeedhay, "Eraygiisii." Suuradda 3:45 waxaa malaggii Maryan uga sheegay Ciise inuu Ilaahay iyada siinayo war wanaagsan, "Eray isaga ka yimid" ama Kalimatiminhu. Ciise waa qofkii bini'aadan ah ee abid noolaa ee loogu yeedhay Eray Ilaahay ka yimid. Labada kitaab midkoodna ma sheegayo in kitaab lagu soo dejiyey, laakiinse Ciise laftiisa, shakhsi ahaan ayaa ahaa Eray Ilaahay ka yimid — Eraygii Ilaahay.
Ciise: Ruuxii Ilaahay
Marka laga soo gudbo inuu Ciise Ruuxa Ilaahay ka dhashay, adeegiisiina waxaa isaga hoggaaminayey Ruuxa Ilaahay. Ciise ayaa erayadan ku bilaabay addeeggiisii adduunka:
"Ruuxii Rabbiga ayaa i dul jooga, Waayo, wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo, Wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan furriinnimada ogeysiiyo Iyo kuwa indhaha la' soo celinta araggooda Iyo inaan kuwa nabaraysan soo furfuro." (Luukos 4:18)
QURAANKU wuxuu Ciise siiyey darajada, Ruuxulaah oo macnaheedu yahay "Ruuxii Ilaahay." Waxay ku qoran tahay Suuradda 4:171, meesha Ciise loogu yeedhay wa ruuxu minhu, "ruux isaga ka yimid." Halkan waxaan ka arkaynaa inuu Quraanku Ciise siiyey magac rabaani ah. Waayo, Erayga Ilaahay laftiisa ayaa inoo sheegaya:
"Ilaah waa Ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta." (Yooxanaa 4:24).
Baybalka iyo Quraanka labadaba way ka caddahay inuu Ciise mid khaas ah yahay. Maaha wax la dhayalsan karo inuu Quraanka laftiisu caddeeyo inuu Ciise:
1. Ka dhashay bikrad
2. Uu ahaa wiilkii haweeneyda ugu karaamaysan
3. Uusan dembi lahayn
4. Uu samada u baxay oo gacanta midig ee Ilaahay fadhiyo
5. Uu soo noqonayo
6. Uu Masiixa yahay
7. Uu Erayga Ilaahay yahay
8. Uu Ruuxa Ilaahay yahay
Muslin ahaan, waxaad taqaanaa Allah, laakiinse ma taqaanaa Ciise Masiix, kan ka yimid IlAAHA RUNTA ah? Quraanka laftiisa yaa kugu dhiirigelinaya inaad wax Ciise ku saabsan ka akhridid Baybalka (Suuradaha 5:46; 10:94-95). Markaa maxaa kaa horjooga inaad bilowdid barashada Baybalka? Ciise Masiix wuxuu yidhi:
"Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee." (Yooxanaa 14:6)
Ilaahay ha idin barakeeyo dhammaantiinba.
24 comment(s)	13973 hits	Read More
1 comment(s)	7086 hits	Read More
2 comment(s)	6896 hits	Read More
2 comment(s)	3371 hits	Read More
0 comment(s)	4635 hits	Read More